The Ab Presents Nepal » रविले “यहाँ मलाई जे पनि गर्न सक्छन्, भाग्न खोज्यो भनेर हानिदिन सक्छन्” भने पछि खैला बिल्ला पुरा पढेर सेयर गर्नु होस् !
रविले “यहाँ मलाई जे पनि गर्न सक्छन्, भाग्न खोज्यो भनेर हानिदिन सक्छन्” भने पछि खैला बिल्ला पुरा पढेर सेयर गर्नु होस् !
चितवन-: पत्रकार टेकनारायण भट्टराईले चितवन प्रहरीको हिरासतमा रहेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसँग कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ ।
भट्टराईको युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक भएको भिडियोमा हिरासतमा रहेका लामिछानेसँग भएको कुराकानीको अडियो समेटिएको छ । हामीले यहाँ पत्रकार टेकनारायणले लामिछानेसँग गरेको कुराकानीको अडियो उतारेर प्रस्तुत गरेका छौं ।भेट अघिको अवस्था टेकनारायणले वर्णन गरेका छन् । आफू रविलाई भेट्न जाँदा रविको अनुहार मलिन भएको पाएको उनले बताएका छन् ।
पत्रकार टेकनारायणसँग रविले गरेको कुराकानी यस्तो छ–
शालिकरामको भिडियो दानबहादुर मल्लले नदिएको भए सर्वेन्द्रजिले दिनुभयो होला । उहाँले रिपोर्ट गर्ने त सर्वेन्द्रजीलाई हो नि त । मेरो हिसावमा उहाँले दिनुभयो । उहाँले दिनुभयो भने उहाँमाथि किन छानवीन नगर्ने । अनि मैले उहाँको अन्डरमा भएको छानवीनलाई विश्वास गर्नुपर्ने ?
विनाकारण मलाई म्याद थपिरहनु भएको छ । मैले उहाँको इन्भेष्टिगेशन मान्नु पर्ने हो ? के थाहा मलाई त उहाँले मार्न नि सक्नुहुन्छ नि ! किनभने म विरुद्ध नै देखियो नि । अरु त केही देखिएन । होइन भन्नेदेखि म्याद थप्नुपर्ने केही नभएको देखिइहालियो । ‘गाइडेड मेन्टालिटी’ देखियोकि देखिएन ?
सरकारी प्रमाण चोर्ने रणबहादुरजी चाँही मेरो अनुसन्धान गर्ने हाकिम भएर बस्नु भएको छ । अनी उहाँको मातहतमा उहाँको घरभित्र म सुरक्षित छुँ त ?
राम्रो भइरहेको छ यो ? म्याद थपको औचित्य कहिँबाट पुष्टि हुन्छ ? ‘ह्वाइ आइ एम इन्साइड ? ह्वाइ आइ एम विहाइन्ड दी बार ? फर ह्वाट ? ह्वाट डिड दे निड फ्रम मी ?’
मैले यति मात्र माग गरेको छु । अस्मिता र युवराजलाई मैले चिनाइदिएको भन्ने उसको कुरा हो । त्यो न्यायाधीशको प्रश्नको जवाफ एकमिनेटमा सकियो । उसको भिडियो झूट भन्ने त्यही छ । त्यो सबै स्पस्ट भइसकेपछि पनि यसलाई ‘लिंगरिङ’ गर्नुको कारण केहो ? परिवारले हेरिसकेको भिडियो फेरि दिएर सार्वजनिक गर्नुको मतलव के ?
मलाई समाइयो, ल्याइयो ठिक भयो । अस्मितासँग न फोन न कुराकानी न कुनै सम्पर्क छ । अदालतमा पहिलोपटक देख्दा थाहा भयो यो पहिलो पटकको भेट भन्ने ।
हामीले भए तीन मिनेटमा यो रिपोर्ट बनाएर सकिन्थो । तर पुलिसको यति धेरै दिन लाग्ने रहेछ ।जसले अनुसन्धान गर्ने भिडियो चोरेर वा निकाले दियो त्यो कसले दियो । दानबहादुर जीले दिनुभयो । मसँग त उहाँले सुरक्षित छ भन्नु भएको थियो ।
दिपक बोहोराको बयान बाँकी छ रे अब । उहाँ भरखर पस्नुभयो हेर्नुभयो भने आधा घन्टामा निस्कनु हुन्छ । कल डिटेल भएन रे ? त्यो ल्याउन कति बेर लाग्छ ? इमेल गरेर माग्यो भने पनि पठाइदिन्छ एनसेलले । अब त्यसको नाममा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यहाँ अनुसन्धान भइरहेको छैन । तलका साथीहरुले काम गरिरहनु भएको छ तर अनुसन्धान पूरै ‘गाइडेड’ छ । यसलाई के गरेर फसाउन सकिन्छ भनेर मात्र तयारी गरिएको छ । फेरि म्याद थप्न कसरी सकिन्छ भन्ने भइरहेको छ । जे पनि गर्न सकिन्छ नि यहाँ त । भाग्न खोज्यो भनेर हान्दिएपनि भयो । त्यो छिद्रामा उहाँहरुले खेलिरहनु भएको छ ।
अब मैले के गर्ने ? यदी सरकारको अनुसन्धानको घेरा भित्र रहेको सरकारी कागज श्रव्य दृश्य, मुख्य सामाग्री लगेर बुझाइदिनुभयो । रुकु कार्की भन्ने बहिनी हुनुहुन्छ उहाँको मानहानी पनि भएको छ । उसले लगाएको सबै आरोपहरु गलत छन् । बदलाको भावनाले आत्महत्या गरेर मरेको छ शालिकराम ।
उहाँहरुको अनुसन्धान मरिसकेको मान्छे ल्याए मात्र पूरा हुन्छ । मरेको शालिकरामलाई कहाँबाट ल्याउने ?कुनै दिन प्रचण्डलाई सलाम गर्थे भन्दैमा दानबहादुरजी जे पनि गर्न पाउँछ ?आवाजविहीनहरुको आवाज बोल्ने मान्छेलाई सिधै मार्दे भै गो नि त्यस्तो पीर छ भने ।
मैले भनेको छु त्यस्तो कुनै योजना छ भने छातिमा हान्नु हान्न चाँहि छातिमा हान्नु पिठ्युतिर नहान्नु भनेको छुँ ।मलाई गरिएको व्यवहार राम्रो छ यहाँ । यहाँ जति राम्रो गरेपनि निर्णय नै गलत गर्न खोजियो भने । सबैले मलाई माया गरेका छन् । तर त्यसले म्याटर गरेन । सुमसुम्याएर भिरबाट धकेलेपछि त्यो सुमसुमाइको मजा के भयो ?
के न्याय यही हो त ? समाचार कक्षमा प्रहरीको बुट बज्छ । हत्या र आत्महत्या पुष्टि नै नभइ समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर उठाएर ल्याइदियो । त्यसपछि जबरजस्ती उसको प्रहरीलाई ल्याएर जाहेरी हाल्न लगाइयो ।
शालिकरामले मलाई अत्याधिक मायो गर्थ्यो । कसैले उसलाई रविदाइले तेरो बारेमा देखाउँदै छ भनेपछि उ टुट्यो । यही देखाएपछि त म सिद्धिन्छु भन्ने उसलाई भयो । उसले यो विषयमा बुझेन ।
मलाई एक कल फोन गरेन गर्न सक्थ्यो । किन गरेन मलाई भने उसले मसँग झुट बोलेको थियो । मार्केटिङमा जान्छु भनेको थियो तर गएकै दिन बेलुका गएर कार्यक्रम गर्‍यो ।
उसलाई लाज भयो । मनमन नै विवस भयो । युवराजले यो भएन उ भएन भनेको कुराले उसलाई पीडा हुँदो रहेछ त्यो उसले पोख्यो । श्रीमतीलाई झुक्याएर अस्मितासँग सम्बन्ध राखेको छ, जो सबैभन्दा पीडित उ छ तर उसलाई फसाइएको छ ।
सबै थाहा हुँदा हुँदैपनि श्रीमतीसँग राम्रो देखिन मसँग लाजले, युवराजसँग रिसले र आफूसँग विवाह गर्न नमानेपछि अस्मितासँग रिस देखाउन प्रतिसोध देखाउन भिडियो बनायो ।म यहाँ कितावहरु पढिरहेको छु, मैले पत्रिकाहरु पढिरहेको छैन ।मुलधार मिडियाले मैले गरेको कामलाई पत्रकारिता मानेन । लोकप्रिय भएको देखेपछि कतिपयलाई यो के पत्रकारिता भनेको होला भने ।
म सञ्चारकर्मी हुँ । म पत्रकार भइरहेको छैन । सबै मानिसको प्लेटफर्म भएका कारण चर्चा भयो होला । तर मूलधारका पत्रकारले मलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी मान्नु भएको छ । मैले गरेको कामले पत्रकारितामा सहयोग गरेको होला ।
म्याद थपपछि चाँहि मलाइ के लाग्यो भने के योजना छ मलाई सजिलै निस्कन दिँदैनन् भन्ने लागेको छ । अदालतमा शालिकरामको भनाइ गलत भएको बताइसकियो तर फेरि म्याद थप गरियो । मलाई शंका भयो । भिडियो सार्वजनिक गर्नेलाई कारवाही नभएका कारण शंका छ ।